Lapan'ny rano Taman Ujung, Bali, Indonesia " Journey-Assist - Ny tsara indrindra any Bali
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Asia » Indonezia » Bali » Water Palace Taman Ujung
Lapan'ny rano Taman Ujung
Fijery momba ny lapan'ny rano Taman Ujung
Taman Ujung Water Palace dia iray amin'ireo lapa 2 rano hita any amin'ny nosy.
Taman Ujung dia trano maritrano miavaka, izay tsy misy analogy eto amin'izao tontolo izao1
Ny lapa Ujung dia any amin'ny ilany atsinanan'ny Bali, ao amin'ny vohitra iray antsoina hoe Seraya. Namboarina ho trano fonenan'ny fianakavian'ny mpitondra ao amin'ny faritany Bali ao Karangasem izy io. Saingy izao dia tsy manatanteraka an'io asa io i Ujung. Izy io dia lasa iray amin'ireo toeran'ny mpizahatany malaza indrindra.
Matetika no atao eto ny mariazy sy ny sary. Ny lapa dia azo antsoina hoe tanora indrindra - latsaky ny 100 taona.
Ny velarantanin'ny trano maritrano manontolo dia mihoatra ny 10 hektara. Mizara telo izy:
Ambaratonga voalohany - ny toerana misy ireo dobo onenan'ireo karipetra mavo, ary misy sarivongana maro manodidina azy. Misy loharano miendrika lotus. Ity loharano ity dia misy ambaratonga 1. Ny haavon'ny ambaratonga ambany dia tandindon'ny tontolo "ambany" onenan'ny demonia.
Ny ambaratonga faha-2 dia ahitana dobo filomanosana koa. Manambara ny tontolon'ny olombelona anefa izy io, ka afaka milomano ao amin'ireny dobo ireny ianao.
Ny ambaratonga faha-3 dia miasa mivantana amin'ny maha fonenan'ny mpitondra. Misy koa ny bungalow ho an'ny vahiny sy ny toeram-pisakafoanana. Ny mpitsidika mafy indrindra dia afaka miakatra tohatra ary mankasitraka ny lapa avy etsy ambony. Ny haavo avo dia maneho ny tontolon'ny andriamanitra.
Manoro hevitra anao ny ho tonga any Ujung amin'ny maraina - amin'ity tranga ity, azonao atao ny misoroka ny hafanana ary manam-potoana hiverenana fotsiny. Ho fanampin'izay, ny fisokafana dia ho an'ny besinimaro ihany hatramin'ny 19:XNUMX.
Sarin'ny lapan'i Taman Ujung
Solon'ny lapa amin'ny sitrapo - Taman Ujung
Tranon-tsambo, Taman Ujung
Lapan'ny rano ao Taman Ujung
Taman Ujung Water Palace amin'ny sari-tany
Lapan'ny Taman Ujung eo ambonin'ny rano amin'ny sari-tany